တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: Relay Control Circuit ( with LDR )
Relay Control Circuit ( with LDR )
ဒီဆားကစ်လေးကတော့ LDR လို့ ခေါ်တဲ့ Light-Dependent-Resistor (အလင်းရရှိမူပေါ် မူတည်သော ရီစစ္စတာ)နဲ့ 555 IC အကို အသုံးပြုထားတဲ့ Relay ကို အလင်းရောင်နဲ့ လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် ပါတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
LDR ပေါ်ကို အလင်းကျရောက်မူကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ခုခံမူဟာ
VR1ရဲ့ခုခံမူထက်များနေမယ်ဆိုရင် 555 IC ရဲ့ ငုတ်နံပါတ် ၂ နဲ့ ၆ မှာပေးသွင်းဗို့ရဲ့ ၃ပုံ ၂ပုံ (၈ ဗို့) ခန့်သက်ရောက်နေမှာမို့ ငုတ်နံပါတ် ၃ မှအထွက်ဗို့ ရရှိပြီး Relay ကပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
LDR ပေါ်ကို အလင်းကျရောက်မူများလာတဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ခုခံမူဟာ
VR1 ရဲ့ ခုခံမူအောက်နည်းနေမယ်ဆိုရင် 555 IC ရဲ့ ငုတ်နံပါတ် ၂ နဲ့ ၆ မှာပေးသွင်းဗို့ရဲ့၃ပုံ၁ပုံ(၄ဗို့) ခန့်သက်ရောက်နေမှာမို့ ငုန်နံပါတ် ၃ မှအထွက်ဗို့ မရရှိတော့ပဲ Relay ပြုတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိလိုအပ်သလို Relay ကို အလုပ်လုပ်စေရန် VR1 ကို လှည့်လှည်ပြီး ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
ရီလေးပြုတ်သွားတဲ့အခါမှာ အပြန်လှန်လျပ်စီး စီးဆင်းမူကြောင့် အိုင်စီပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်1N4001 ဒိုင်အုပ်ကို အသုံးပြုရပါမယ်။
(( LDR ကို ရန်ကုန်မြို့ သိမ်ကြီးဈေးရှိ ဦးရွှေလင်း၊ဒေါ်ကြင်ကြင် အီလက်ထရောနစ်၊ မောင်ခိုင်လမ်းရှိ ဥသြ အီလက်ထရောနစ်၊Mandalay မြို့တွင် မျိုးသိန်းအီလက်ထရောနစ်၊ မုံရွာမြို့တွင်လွင်အီလက်ထရောနစ်တို့တွင် ၀ယ်ယူနိုင်သကဲ့သို့ နီးစပ်ရာ
အီလက်ထရောနစ်အပိုပစ္စည်းဆိုင်များမှာလဲ လွယ်ကူစွာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်))
>>ကျတော်စတင်တွေ့ကြုံစဉ်က LDR ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းနှင့် ဘယ်မှာဝယ်ရမယ်ဆိုတာကို မသိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ ဖော်ပြပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ....
Posted by အောင်မျိုး at 2:18 PM
Labels: အီလက်ထရောနစ် အခြေခံ
All China Cell Phones Hard Reset & Format Codes
ဘန်ကောက် လမ်းညွန် 1.0 APK မြန်မာလို
Computer ဆိုင်ရာ, Mobile ဆိုင်ရာ, အခြား IT ဗဟုသုတမ...
InDesign သမားတွေအတွက် ဖုန်းထဲ့မှာkeyboard shortcut...
အလွယ်ဆုံး Blog Facebook Like Box ထည့်နည်း
Blogger-Backgrounds တွေကို စိတ်တိုင်းကျ အလွယ်ဆုံး ...
2017 Android Tool Collection
Samsung Galaxy J7 Prime [SM-G610F] Firmware (THL) ...
Samsung Galaxy J2 Prime [SM-G532G] Firmware (THL) ...
Miracle Box 2.40 Full Crak 100%
အင်္ဂလိပ် Movies တွေက ဇာတ်ကားတွေကို ဖုန်းထဲ့ ကအလွယ်ဆ...
Jarhead3The Siege (2016) HD Full ရုပ်သံ/အကြည်
Standoff (2016) ရုပ်သံ/အကြည်
Arrowhead (2016) ရုပ်သံ/အကြည်
Captain America3Civil War (2016) ရုပ်သံ/အကြည်
Captiain America - Cilivi War (2016) လုံးဝ အကြည်ကာ...
Captain America Civil War  HD လုံးဝ အကြည်ကား...
Batman v Superman Dawn of Justice [ 2016 ] HD လုံး...
Triple9(2016) ရုပ်သံ / အကြည်
Xmen Apocalisis (2016) ရုပ်သံ/ အကြည်
Never Back Down No Surrender (2016) HD
Special ထူးထူးခြားခြား အရမ်းမိုက်တဲ့ The Legend of...
Friend Request - La morte ha il tuo profilo - Film...
Other Side Of The Door (2016) HD လုံးဝအကြည်
Mafia- The Game of Survival 2016 [HD]+(879.6 MB)
FACE BOOK အကြောင်းကို တက်ဆက်ထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ကား-Fri...
Code 8 (2016)HD 720p ရုပ်သံ/အကြည်
Against the Wild 2: Survive the Serengeti (2016) H...
The Wild Life (2016) HD 720p ရုပ်သံ/အကြည်
The Night Before Enlisting (2016) HD18+720pRip ရုပ...
Kill Command (2016) HD 720p ရုပ်သံ/အကြည်
Black Tar Road (2016) HD 720p ရုပ်သံ/အကြည်
Hidden Camera Basic Instinct (2016)HD18+720p ရုပ်သ...
Lost and Found (2016)HD 720p ရုပ်သံ/အကြည်
League of Gods (2016) HD Full
Hardcore Henry (2016) HD Full
Ben-Hur (2016) HD Full
Suicide Squad (2016) HD Full
A Chinese Odyssey3(2016) HD Full
I.T.. HD လုံးဝအကြည်ကား
The Legend of Tarzan.(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Samsung FRP 2016 Easy Tools 100%
ရတနာမိုင် - သူသိစေ (2016) [MP3 Album ]
မိမိ Blogger မှာ တင်သမျှ ပိုစ့်တွေကို Facebook ,Pa...
Format Factory v 3.9.0.0 ဗားရှင်းအသစ်
Android ဖုန်းတွေရဲ့ လျှိူ့ ဝှက်ကုဒ်များ Applicatio...
မနော ချစ်သူများအတွက် မနော ဖုန်းဝင်တုန်း
မီးသီးထွန်းနိုင်ပြီး အားပြန်သွင်းမယ့် ဆားကစ်
ကိုထွဋ်ရဲ့ မီတာတိုင်းခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းများစမ...
Memory card & Sd card တို့ရဲ့အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံ......
ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လင်းစေမယ့် ဆားကစ်........(Nigh...
မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် လင်းမယ့်ဆားကစ်
Play Boii - Started Out On A Wednesday ( 2016 Albu...
Rap Gun - သူ့ကျွန်မခံအနုပညာ ( 2016 Album )
Htet Yan - October 18 ( 2016 Album )
ရဲလေး - အောင်မြင်မှုခရီးစဉ် ( 2016 Album )
Bunny Phyoe - LUCKY 2016 Album